Heshiisyadii keenay in 50 sanno ka hor la dilo Cabdirashiid Cali Sharmaake. – Xeernews24
Heshiisyadii keenay in 50 sanno ka hor la dilo Cabdirashiid Cali Sharmaake.
16. Oktober 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
“Miis baa loo keenay, waxaa la yidhi ‘waxaad ku qortaa waxaad rabtaan’ 20-kun oo ciidan, hubkood, taangi iyo wax walbaa lagu qoray,” ayuu Yuusuf ku sheegay wareysi uu siiyey VOA-da laanta Af Soomaaliga.
Maadaama uu xifaaltan ka dhaxeeyay, reer Galbeedka ayaa aad uga cadhooday bogga cusub ee u furmay xidhiidhka Soomaaliya iyo Ruushka, waxayna cadaadis xoogan saareen madaxweynihii waqtigaas dalka xukumayey.
Yuusuf ayaa ka jawaabaya sababta loo dilay Sharmaake: “Midowgii Suufiyeenti [Ruushka] buu xidhiidh la sameeyay 17-mashruuc baa la saxiixay oo ciidanka, shirkadaha iyo waxbarashada, dabadeedna Midowgii Suufiyeenti iyo Dowladda Soomaaliya ayaa isku dhawaaday, markaas ayaa nimanka reer Galbeedku ka xumaadeen dabagalna ku sameeyeen”.
“Cigaal oo xisbiga SNT ka tirsanaa ayaa intii ay reer Galbeedku la hadleen waxaa la yiri ‘SNT kasoo tag Leegada tag, Cabdirashiid baa soo bixi doono’. Cabdirashiid-na la hadleen la yidhi ‘Cigaal ra’iisul wasaare ha dhig’ wax waan wada qeyb-saneynaayeen tanaasulaad buu la galay,” ayuu raaciyey hadalkiisa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Abdirashir-Ali.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-16 12:45:512019-10-16 12:45:51Heshiisyadii keenay in 50 sanno ka hor la dilo Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Dawlada Turkiga oo soo dhisaysaa ciimadda Cirka ee Soomaalia. Dowladda Jarmalka oo Qaxooti Soomaali ah ka qaaday dalka Itoobiya (Sawirro)